Ememme ịzụ ahịa Dubai | Ndị njem nlegharị anya n'afọ ọ bụla n'oge mmemme a na-etinye aka na ịzụ ahịa na ọtụtụ ihe ọchị
Ị dị njikere ịgafe ụwa maka ịzụ ahịa?
Maka ọtụtụ ụmụ nwanyị (na ụmụ nwoke ole na ole) azịza ya ga-abụ ee!
Enwere ọtụtụ obodo gburugburu ụwa bụ ebe ịzụ ahịa maka ndị njem nlegharị anya kemgbe ọtụtụ afọ, Dubai ịbụ otu n'ime ha. Dubai kwa afọ na-akwado ememme ịzụ ahịa Dubai dị oke egwu. Ememe Shoppingzụ ahịa Dubai mara nke ọma maka ọtụtụ ebumnuche. Ihe omume ahụ na-aga azụ na 1996, mgbe Ya Mohammed bin Rashid Al Maktoum, osote onye isi ala na Prime Minister nke UAE na Onye Ọchịchị nke Dubai, bu n'obi iwebata ihe omume azụmaahịa nke ụwa nke ga-adọta ndị mmadụ si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa gaa UAE. Ọfọn, ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme.
Gịnị mere Dubai Shopping Festival?
Dubai Shopping Festival dị n'akụkụ akuku, anyị na-enwekwa obi ụtọ dị ka onye ọ bụla ọzọ. Ekwenyere na mmemme a na-adọta ihe karịrị nde ndị njem nlegharị anya 5 kwa afọ. Ọ bụ n'ezie ememme n'ihi na ihe omume ahụ gụnyere ngwugwu ngwugwu dị ịtụnanya na mbelata, ihe ruru 70% kwụsịrị na uwe, ngwa elektrọn na ihe ndị a ma ama, enwere ọkụ ọkụ na-egosipụtakwa nke ọma n'akụkụ dị iche iche nke obodo ahụ. Ọ bụ oge ị ga-aga Dubai n'oge mmemme a ma na-azụ ahịa na ọtụtụ ihe ọchị.
Kedu ihe dị ọhụrụ n'afọ a?
A ga-eme ememme ịzụ ahịa Dubai n'ofe ọtụtụ ebe na nnukwu ụlọ ahịa na Dubai. Obi ụtọ ahụ ga-adị elu n'ihi na a ga-ere ahịa mega nke awa 12 na-eme n'ụbọchị mbụ nke DSF, yana ọnụ ahịa mbelata ihe ruru 90% kwụsịrị ụfọdụ ihe na azụmahịa kwesịrị ịzụrụ. Ụlọ ahịa Majid Al Futtaim isii ga-esonye, ​​na-egosipụta mbelata ego na ọnụ ahịa ebelatalarị. Ị ga-enwe ike ibupụta izu ohi sitere na ụdị 700 n'ofe ụlọ ahịa 3200.
Ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị banyere ememme a ga-abụ sinima gbapụta, gwongworo nri na-ere nri na-atọ ụtọ, ọtụtụ egwu na egwu egwu. A ga-enwekwa Market Outside The Box (MOB) nke na-egosi mgbe niile ihe na-akpali akpali na ọhụrụ. Ọ bụ mmegharị omenala okike ma ga-egosipụta ụdị 80 mpaghara na mba ụwa na-apụta. Ọkụ ọkụ n'oge DSF agaghị echefu. A ga-enwe nnukwu ọkụ ọkụ kwa izu ụka n'ebe dị iche iche n'ofe obodo ahụ, gụnyere Obodo Nta Nile, The Beach, Osimiri Dubai, Zabeel Park, na Creek Park.
Kedu ihe kpatara ị ga-eji gaa Dubai n'oge DSF?
Enwere ike ịhụ azụmahịa DSF n'ụlọ ahịa ọ bụla yana ọkachasị ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ofe obodo ahụ. Ejiji na akwa bụ ogidi nke ememme a mana enwela nkụda mmụọ n'ihi na ị ga-ahụkwa azụmahịa na-eku ume na ngwa eletrọnịkị. A maara Dubai maka ahịa ọla edo ya, ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ n'obi maka ọmarịcha ọla, nke a bụ oge. Ememme a nwere ike imebi gị maka nhọrọ ndị sitere na elekere, ihe na-esi ísì ụtọ, akpa, akpụkpọ ụkwụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Nri na egwu bụ akụkụ nke mmemme dịka ịzụ ahịa.
Ndị mmadụ nọ na Dubai na ndị na-eleta Dubai ga-emebi onwe ha site na onyinye DSF ma nwee ọ enjoyụ na ọnụnọ na họtel, ebe ntụrụndụ; gaa na ogige ntụrụndụ na ebe na-aga na ọnụ ahịa mara mma. Isi ihe nkiri mmemme dị ka Ememme Nkiri International nke Dubai na Ememme Nkiri International nke ụmụaka a na-eme gburugburu oge a. Ọ bụrụ na ị gaghị echefu, ndị na-azụ ahịa nwere ohere iji nweta ihe nrite ruru nde 100 Dhs, n'oge mmemme niile. A ga-enwekwa ọnụ ahịa jackpot nke Dhs 1 Million nyere otu onye mmeri nwere chioma. Ihe nrite ndị ọzọ bụ ụgbọ ala okomoko, ọla edo na akwụkwọ ego.
Royal Arabian na DFS
Royal Arabian Njikwa ebe njedebe nwere ụfọdụ nkwekọrịta pụrụ iche maka ndị mmadụ na-eme atụmatụ nleta na Dubai n'oge DSF. Nkwekọrịta ndị a pụtara ìhè na-achịkọta ụwa nke ịzụ ahịa na-akparaghị ókè na-ejikọta ya na ebe ndị njem nlegharị anya kacha mma, ezumike okomoko, na ihe ọchị na-adịghị agwụ agwụ. Royal Arabian ghọtara ezi mmụọ nke DSF, ngwugwu anyị bụ ngwakọta nke oge kacha mma nke Dubai ga-enye.
Ememe Shoppingzụ ahịa Dubai na-ahapụ anyị ka anyị nwee mmasị n'ịzụ ahịa na mgbakwunye na mmemme na onyinye. Dubai etinyela ụgbọ mmiri ịnabata mmemme ịzụ ahịa. Ịgba ọsọ na ọgba aghara gburugburu obodo ahụ, ọkụ na-egbukepụ egbukepụ, ihe ịchọ mma a na-eme ememme, ihu igwe mara mma, na ihu obi ụtọ na-egosi na ọ dị mkpa ka i so na ya. Agbagharala onyinye DSF anyị, ha enweghị atụ. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-enwe mmasị na ya. DSF bụ ebe ụwa na-abịa ịzụ ahịa, dịka ekwuru n'akwụkwọ akụkọ ha.
By eze 21|2022-05-23T17:53:35+05:30December 18th, 2018|blog|Comments Off on Ị dị njikere ịgafe ụwa maka ịzụ ahịa?